Know your values - Calm Hill
ရန်ကုန်ကျောင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ့်တုံးကသင်ခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမတွေအကြောင်း စကားစပ်မိလိုမေးမြန်းရင်း ပထမနှစ်က Programming ဘာသာချိန်တွေဆိုတက် တစ်ခြားဘာသာတွေဆို အတန်းမတက်ပဲပြေးဆိုပြီး ပေခဲ့တေခဲ့တာတွေပြောတော့ နားထောင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းက ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာပဲ စိတ်ဝင်စားရင်လည်း မကောင်းတဲ့အကြောင်း ကျောင်းသားတွေသိစေချင်လို့ ဆောင်းပါးတစ်ခုရေးနေတယ်လို့ဆိုတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ကြားထဲကလူဆိုတော့ သူဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ပါတယ် ကျောင်းသားတွေ ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာကိုပဲ အဓိကဆိုပြီးစိတ်ဝင်တစားလုပ် အခြားသောသိရမယ့်ဘာသာတွေ လေ့လာချိန်မရှိတော့ပဲ ဖြစ်သွားတာတွေများကြီးပဲ ပရိုဂရမ်မင်းဆိုတာ တကယ်တော့ လက်နက်ကိရိယာတစ်ခုပဲ တခြားအရာတွေမတတ်ရင် ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး နောက်တစ်ခုက ပရိုဂရမ်မင်းတစ်ခုခုမှ အသေအချာတတ်မထားရင်လည်း အခြားသောအဆင့်မြင့်တဲ့ဘာသာတွေ လေ့လာလို့မတတ်နိုင်ဘူးလို့ ကိုယ်တိုင်လည်းပြောလေ့ရှိတယ်။
ဒါကကျောင်းသားတွေ မှားနေတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြတာကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကလည်း အခြားသောတစ်ဘက်က အမှားကိုလည်းမပြောပဲနေလို့ မဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောရတယ်။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံကိုသင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေဟာ ပရိုဂရမ်မင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာ တကယ်တော့မရှိပါဘူး သင်ကြတဲ့လူတွေက သက်ဆိုင်တယ်လို့ဆက်စပ်ပြီး မသင်နိုင်ကြရာကနေ ဒါတွေက ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာ ဒါတွေကတော့ ကျောင်းသားအခေါ် ကျက်စာဆိုပြီးဖြစ်ကုန်ရတယ် အဲဒီလိုဖြစ်ရတာကိုတော့ ကျောင်းသားကိုအတင်း အပြစ်တင်ရင်တော့ တရားတယ်မဟုတ်ဘူး ကိုယ်တောင်မှ ဘဝမပျက်အောင် မနည်းနေခဲ့ရတာပါ ဒါတောင်မှ အဲဒီ့အချိန်က ကြိုးစားမှု့မျိုးနဲ့ အခြားတစ်နေရမှာသာရှိနေရင် ဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ ကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေကို နှမျောမိတတ်တယ်။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီးတော့ အတင်းကိုဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့ ကျောင်းသားမှတပါး အများစုကတော့ ဆရာကိုယ်တိုင်က ရှေ့မရောက်တော့ ပိုပြီးတော့နောက်ကျ ကျန်နေခဲ့တော့တယ်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ Software Engineering ကို Ian Sommerville ရေးတဲ့စာအုပ်ကြီးနဲ့ နှစ်တွေအများကြီးသင်တယ် ဒါပေမယ့် ၃ နှစ်လောက်သာ အချိန်ကုန်တယ် ဘယ်သူမှလက်တွေ့နဲ့ မဆက်စပ်ဖူးဘူးလို့တာ Sommerville သိရင် Pirate လုပ်ခံရတဲ့စာအုပ်ထက် သိက္ခာကျလို့ဆိုပြီး စာရေးတဲ့လူနာမည်လေး ဖျက်ပြီးမှစာအုပ်ပြန်ရိုက်ပါလားလို့ အသနားခံစာပို့နိုင်ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောနေတာ နားထောင်ရတာ နားခါးပေမယ့် ပြောတာကတော့ပြောရပါတယ် Software Engineering ကိုတောင် Implementation နဲ့ဆက်စပ်ပြီး မသင်နိုင်ကြတော့ဘူးတဲ့လား။ C.J. Date ရဲ့စာအုပ်ကြီးနဲ့ ၃ နှစ်လောက်သင်ခဲ့လည်း Database System တွေနားလည်ဖို့နေနေသာသာ Query တောင်ဖြောင့်အောင်မရေးတတ်ဘူး မှားတယ်တော့မဟုတ်ဘူး Query ကအလွန်ဆုံးမေးရင် ၁၀ မှတ်ဖိုးလောက် မရေးတတ်လည်း စာမေးပွဲကတော့ အောင်နိုင်တာပါပဲ။ Programming Languages & Compiler Design လိုဘာသာတွေကို ပရိုဂရမ်မင်းဘာသာလို့ပြောရင် ဘာသာတွေရဲ့နာမည်မှာ ပရိုဂရမ်မင်းလို့ ပါနေလို့သာကျောင်းသားက မငြင်းတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ Operating System လိုဘာသာကို ပရိုဂရမ်မင်းနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးပြောရင် ကျောင်းသားတွေအားလုံးက ဟုတ်တယ် အဲဒါလည်းကျက်မှဖြေနိုင်တာလို့ တစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲ ထောက်ခံကြမှာပါပဲ။
ဘာသာရပ်တွေမှာ လက်တွေ့ဟာအလွန် အရေးကြီးပါတယ် မလုပ်ဖူးခဲ့ရင် ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိမှန်း နားမလည်နိုင်သလို ထပ်ပြီးကြုံရမယ့် အခက်အခဲတွေလည်း နားလည်နိုင်ဖို့မရှိတော့ဘူး။ လက်တွေ့ဆိုတဲ့နေရာမှလည်း အပြင်မှာက ဘယ်လို Language တွေသုံးနေပြီ ကျောင်းမှာသင်တာက မသုံးတော့ဘူးတို့ ဒို့ဆီမှာက ၁ နှစ်လောက် Programming သင်လိုက်ရင် အလုပ်လုပ်လို့ရနေပြီ တက္ကသိုလ်က ကျောင်းပြီးလည်း ဘာမှမတတ်ဘူးတို့ အမျိုးမျိုးပြောတတ်တယ် ဒါတွေက စေတနာနဲ့ပြောတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမယ့် တက္ကသိုလ်ဆိုတာဘာမှန်း တကယ်တမ်းရေရေ ရာရာမသိတဲ့လူတွေ ပြောကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအတွက် ဒီထက်ပိုပြီးလုပ်ရမယ့် အရာတွေအများကြီးကို သူတို့မသိကြဘူး။ ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဥပမာတွေနဲ့ပြန်ပြောရရင် အလုပ်ဆိုတာက စဝင်တဲ့အချိန်မှာ ပန်းရံအလုပ်နဲ့စမှာဖြစ်ပေမယ့် တက္ကသိုလ်မှာ အချိန်တွေ ၄ နှစ်လောက်ပေးခဲ့တာဟာ အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိ ဆက်သွားဖို့ပြင်ဆင်ရတာ ပန်းရံအလုပ်သမားအဆင့်နဲ့ ရပ်ဖို့စိတ်ကူးရင်တော့ တက္ကသိုလ်မှာ အချိန်ဘယ်အကုန်ခံမလဲ ၆ လ ၁ နှစ်နဲ့လည်း အလုပ်ခိုင်းရတဲ့အခြေအနေတော့ သင်ပေးပြီးတော့ အလုပ်တော့ခိုင်းလို့ရတာပေါ့။
Programming တစ်ခု အသင့်အတင့် တတ်ပြီဆိုရင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအနေနဲ့ လက်တွေ့အနေနဲ့ လုပ်စရာတွေများကြီးရှိတယ် ပရောဂျက်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး Software Engineering Process တွေကို စနစ်တကျလုပ်ကြည့်ရတယ် Operating System စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ Concurrency Problem လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ သာမန် Programming Skill နဲ့ ရေးလို့မရနိုင်ပါဘူး ဒါမျိုးတွေကြုံလာရင်ကိုယ့်ရဲ့ Programming Skill ဟာမလုံလောက်မှန်းသိလာလို့ ထပ်ပြီးလေ့လာဖြစ်တယ် နောက်ပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့ Tools တွေကြောင့် Operating System တစ်မျိုးတည်း သုံးနေတာဟာလည်း မလုံလောက်မှန်းသိလာတယ် အဲဒီတော့ထပ်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်လေ့လာရတယ်Compiler Design တွေဆိုရင်လည်း ဘယ်သူမှတော့ Compiler ပြန်တော့မရေးပါဘူး ဒါပေမယ့်ဆက်စပ်နေတဲ့ Automata တွေကိုတကယ်တမ်း Implement လုပ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ့အတွေ့အကြုံတွေဟာ Language Processing/ Text Processing လုပ်တဲ့နေရာမှာ အင်မတန်ကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ Distributed System တွေဆိုရင် တကယ်တော့ အခုခေတ်မှာလူတွေသုံးနေတဲ့ Web, Mobile စသည်ဖြင့်အားလုံးက Distributed System တွေပါပဲ ပြေးမလွတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းလုပ်ရင် အချိန် ၄ နှစ်ဆိုတာ မလောက်ငှပါဘူးလေ ခဏလေးပဲကုန်သွားတယ်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအနေနဲ့ ပထမနှစ်မှာ Hello World! နဲ့ Console မှာနှစ်ပါးသွားနေတာကို ကြိုးစားနေတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူတတ်ရတယ် အဲဒီအချိန်မှာ အပြင်မှာနေလို့ Wordpress နဲ့ Website တစ်ခုလုပ်တတ်ပြီလို့ လာပြောတာကို အားမကျဖို့လိုတယ် အဲဒီလူအနေနဲ့ ၂ လ ၃ လ လေ့လာပြီးတာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ကိုယ့်အတွက်က အချိန်တန်ရင် ၁ ရက်လောက် စာဖတ်ကြည့်ရင် လုပ်တတ်တဲ့အခြေအနေလို့ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Computer Technology ကကျောင်းသားလည်း ကွန်ပျူတာပြင်ဆိုင်က ကွန်ပျူတာပြင်တဲ့လူကို အားမကျရဘူး ကိုယ်သင်နေတဲ့ Architecture, Data Communication, Device, Hardware အဲဒီလိုဘာသာတွေကို အာရုံစိုက်ရတယ် တကယ်က ကွန်ပျူတာဆိုင်က ကွန်ပျူတာဆင်တယ်ပြင်တယ်ဆိုတာက တော်တဲ့အပေါက်တပ်လိုက်တာထက် မပိုဘူးဆိုတာနားလည်လာပါလိမ့်မယ် ကျောင်းသားဘဝမှ အဓိကနဲ့သာမညခွဲတတ်ရပါတယ် တက္ကသိုလ်ဆိုတာ အခြားလူတွေ ဖန်တီးထားတဲ့ အရာတွေကို ဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတာထက် ဘယ်လိုဖန်တီးထားသလဲ လေ့လာဖို့အတွက် အချိန်ပေးထားတာ ဒီထက်ပိုထူးချွန်ရင်တော့ လက်ရှိကနေအထက်ကို အသစ်ဖန်တီးနိုင်မှာပေါ့။ ဘီးဆိုတာအစက တီထွင်စရာမလိုပါဘူး ဒါပေမယ့် ဘီးဘယ်လိုတီထွင်ထားလဲ မသိတဲ့လူကတော့ အလွန်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရင် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သုံးတတ်တယ်ဆိုတာထက် ပိုနိုင်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာ ပြောနေစရာမလိုအပ်သင့်ဘူး သင်ပေးတဲ့ဆရာတွေက ကိုယ်သင်နေတဲ့ ဘာသာတွေရဲ့တန်ဖိုးကို ရေရေရာရာမသိလို ဖြစ်ကြရတာ တစ်ချိန်တုံးက Final Year Project ကိုဖျက်လိုက်ပြီး Project မပါပဲဘွဲ့ပေးတာကို ရင်နာလို့မဆုံးဘူး တကယ်ဖြစ်သင့်တာက ဘာသာတိုင်းမှာ Project ထပ်တိုးပြီးထည့်ရဦးမှာ။ ဆရာတွေအသုံးမကျဘူး ပြောပြန်ရင်လည်း အသုံးကျတဲ့လူလည်းရှိ မကျတဲ့လူလည်းရှိပါတယ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်တမ်းလုပ်နေရတဲ့လူတွေက ဆရာပေါက်စတွေ သူတို့မှာကပြင်ချင်လည်းဘယ်လိုမှ ပြင်ခွင့်ရှိကြတာမဟုတ် ထားရာနေစေရာသွား ခိုင်းသလိုသင်ကြရတာလည်း သိနေတဲ့လူဆိုတော့ အဲလိုလည်းဝါးလုံးရှည်နဲ့ ပြောလို့မဖြစ်ပြန်ဘူး။ COE ဆိုပြီးအမှတ်မြှင့်ခေါ်တော့ စာကြိုးစားဖို့ထက် အဆင့်တန်းခွဲပါတယ်ဆိုပြီး အော်နေကြတာပြီးသေးပုံမပေါ်ဘူး တက္ကသိုလ်ကို အလုပ်သမားမွေးမြူရေးစခန်းလိုယူဆပြီး အားရပါးရပေးနေကြတဲ့အကြံဉာဏ်တွေမြင်ရ စာသင်နှစ်ကို ၃ နှစ်ကို ၄ နှစ်တိုးလို့ဆိုပြီး သမ္မတရုံးတက်တိုင်တဲ့ ကျောင်းသားမိဘတွေဆိုပြီး ဇာတ်လမ်းစုံကြားရတော့ ပညာရေးကိုတိုးတက်စေချင်တယ် ပြောနေပေမယ့်တကယ်ကျတော့ စာရွက်ထဲကဘွဲ့ကိုပဲ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာအမှီ လိုချင်နေသလား တွေးမိပြန်တော့ သူ့အရပ်နဲ့သူ့ဇာတ် ကိုက်နေတာပဲလေလို့ပဲ အတွေးစကိုရပ်ရတော့တယ်။